Blog – MASAF
Cunto-soosaarka dalku wuxuu qayb weyn ka qaataa sugnaanshaha cunto ee qaran kasta, waxaanay hirgelisaa in dalkaasi gaadho hanashada cunto ku filan oo dheellitiran. Barnaamijyo qayb ka ahaa ‘Maalinta Caalamiga ah ee Dhallinyarada Adduunka’ oo lagu qabtay #MadashaMASAF, ayaa mid ka mid ah lagaga hadlay; “Doorka Dhallinyaradu ku leedahay cunto-soosaarka dalka’. Local #food production contributes any […]
Bandhiggan waxa ka qaybgalay masuuliyiin sare oo ka socda Dawladda JSL, Ururada Caalamiga ah, Abwaanno, Ururrada bulshada rayidka ah, aqoonyahan iyo marti-sharaf kale, ayaa ujeeddadiisu ahayd soo gudbinta iyo bandhigga dhaqanka Soomaaliga ah iyo noloshii Miyiga. Ujeeddada labaad ayaa ahayd in la xuso haldoorkii fanka Soomaalida ee uu geeridooday intii uu bilaabmay Cudurka COVID19, kuwaas […]